Homeसमाचारकहाँ गायव भए महाभारतको युद्धमा मा’रिएका शव ?
October 17, 2020 admin समाचार 11703
हिन्दु धर्ममा महाभा’रतको निकै मह’त्व छ । महाभा’रत के हो भन्ने कुुरा त धेरैला’ई थाहा नै हुनुपर्छ । महाभा’रतको युद्ध १८ दिनसम्म चलेको थियो । शास्त्र’मा उल्लेख भएअनु’सार, महा’भारतको युद्धमा लाखौं महान वीर योद्धा’हरुले आफ्नो ज्या’नको आहुति दिएका थिए ।
महाभारतको युद्धमा कुरु’क्षेत्रको पूरा धर्ती नै र’क्तरञ्जित भएको थियो । तर महाभा’रतको युद्धमा मारि’एका त्यति धेरै योद्धा’हरूको शव कहाँ गयो भन्ने खुल्दु’ली सबैलाई हुने गर्दछ । साथै उनीह’रूको अन्तिम संस्का’र कसरी भयो भन्ने कुराले हा’मीलाई अ’चम्मित बनाईदिन्छ ।
त्रेता’युगमा रामाय’णको युद्धताका श्रीरामले समुन्द्रमा सेतुको निर्माण गराएका थिए । यसको तथ्य वैज्ञा’निकले त्यहाँ पुल पत्ता लगा’ईसकेका छन् । के छन् त त’थ्यहरु ?
महा’भारतको युद्धमा मरेका यो’द्धाहरूको शव वा अस्थि’पञ्जर त्यतिबेलै जलाईए’कोले भेटिएन । किनभने त्यसबेला अहि’लेको जस्तो शत्रुमाथि दुव्र्यव’हार हुँदैनथ्यो ।
महाभारत’को युद्ध दिनको चार प्रहर सकि’एसँगै रोकिने गरेको थियो । र, जोजो युद्धमा मा’रिएका थिए उनी’हरूको शव’लाई त्यहि दिन नै अन्तिम संस्कार गरिने गरि’एको थियो वा परिवार’लाई जिम्मा लगाइने गरिन्थ्यो । -खबरहब बाट
August 22, 2020 admin समाचार 34624
April 16, 2022 admin समाचार 1298
March 11, 2021 admin समाचार 5545